Mogadishu Journal » Hadal Jeydinta Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha oo bilaabatay (Sawirro)
Hadal Jeydinta Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha oo bilaabatay (Sawirro)
Waxaa goordhaw teendhada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho ka bilaabatay hadal jeydinta musharaxiinta u taagan xilka Madaxwreynaha Soomaaliya, kuwaa oo jeedinaya barnaamijkooda siyaasadeed ee qaban doonaan haddii loo doorto Madaxweyne.
Kulanka wadajirka ah ee Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku dhageesanayaan hadal jeedinta musharaxiinta waxaa shir guddoominaya guddoonka labada Aqal ee Baarlamanaka federaalka.
Qaar kamid ah musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya oo xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka federaalka u jeediyay barnamaijkooda siyaasadeed ayaa ka codsaday in codkooda siiyaan si ay uga dhabeeyaan ballanqaadka ay sameeyeen.
Xildhibaanada labada Aqal ayaana maanta kaliya dhageesan doona hadal jeydiinta musharaxiin gaara 20-musharax, kuwaa oo soo bandhigaya barnamaijkooda siyaasadeed ee dalka ku hoggaaminayaan 4-ta sanno ee soo socota.
Aaska weriye Shariin Abuu Aqel oo lala sugayo walaalkeed oo ka imanaya Somalia